Ejiri ICON Health na Fitness na-emepụta aha aha ProForm. ICON Health and Fitness bụ ụlọ ọrụ dabeere na Utah nke na-elekwasị anya n'ichepụta mmega ahụ. ICON Health & Fitness nwere ọtụtụ ndị ọzọ treadmill ụdị tinyere NordicTrack, Na-emetụ ya n'ahụ, na Freemotion. Ị ga-achọpụta na nkeji ọ bụla site na akara ọ bụla dị nnọọ mma ma ọ bụrụ na i jiri ụdị ọ bụla tụnyere.
Aha ProForm nke a na-agbanyela akawanye mma n'ime afọ ndị gara aga. Ha abawanyewanye nke ọma na ihe ProForm bụ mpempe akwụkwọ a ma ama nke Boston Marathon. Otú ọ dị, buru n'uche na e nwere ọtụtụ ihe ndị na-agba agba n'ime aha a. Ọdịdị ha, ogologo oge, na ego ha dịgasị iche iche.
ProForm nwere ụdị ihe ntanetị dị iche iche maka 2016. Usoro ike na-emepụta ihe na-efu $ 999 na $ 1999. A na-etinye ihe ndị dị omimi na Pro usoro na Boston Marathon Series n'agbanyeghị na nkeji a ga-eri ihe. Marathon Treadmills Boston bụ ihe ndị ProForm ji arụ ọrụ kachasị elu. A na-eche maka nke a maka ndị na-eme egwuregwu na-agba ọsọ ruo ọtụtụ awa n'otu oge.
Ngwongwo ndị na-emegharị marathon bụ nhọrọ ProForm dị oke ọnụ. Ha dị ike ma dị ogologo iji kwado mile mile 4. Ha na-agụnye mmemme ọzụzụ nke marathon maka ndị mbido na mgbakwunye na ndị egwuregwu kacha elu. Ndi nwe Marathon nke Marathon Boston nwere ike ịnweta nkwụsị nke nwere ike ịgbanwu, nkwụsị na-adagharị adaba, gbanwee arụmọrụ vidiyo ndị dị elu nke a na-ese na agba ọsọ Boston. A na-egosi mmega ahụ na 10 "color touchscreen.
Ihe 2 bụ 3.0 Boston Marathon Treadmill na Boston Marathon Treadmill 4.0. 4.0 nwere ngwa ngwa SpeedRing. SpeedRing bụ akara ọsọ na-enweghị aka nke na-akụnye ọrụ Bluetooth.
ProForm na-eme ka ihe dị iche iche na tebụl dị iche iche. Ụdị ihe ndị dị na tebụl bụ ProForm Thinline na ProForm Thinline Pro. Enwere ike iji mpaghara ndị a nwere ike iji ya na kọmputa gị.
N'adịghị ka ọtụtụ ihe ndị dị na tebụl, ihe ndị ọ bụla ProForm na-enweta nwere okporo ụzọ sara mbara ma jupụta atụmatụ ndị gụnyere ntanye / ịda, 30 na ngwa 40 na-arụ ọrụ, na teknụzụ iFit.
Usoro ProForm na-enye ndị mmadụ aka ịchọ ihe mmega ahụ bara uru. Ihe ka ọtụtụ n'ime mkpọ ndị ahụ bụ 60 "ogologo oge ọ bụla na ihe ọ bụla n'ime ihe ndị a bụ SpaceSavers. Enwere ike igbanye Gburugburu SpaceSaver ka ọ dịkwuo ala. Ihe eji eme ihe ngosi nke ihe omume nke Proform na-enwe XIUMX% Maxium na-enyere ya aka. A na-erekwa ndị òtù IFit iche iche. Mkpụrụ nke ndị a na-agba ọsọ site na 12 gaa na 2.75 HP.
Usoro Ngwá Ọrụ Proform
Usoro nhazi nke Proform gụnyere ọtụtụ nkeji. Mkpụrụ ahụ na mpaghara ndị a sitere na 2.0 gaa na 2.75 CHP. Nkeji n'ime usoro nhazi ahụ na-ewepụta ihe dị na 10-12%.
Ndị na-arụ ọrụ na mpaghara ndị a dị mkpụmkpụ karịa ụdịdị Proform ndị dị elu. Ihe ka ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-eme na 55 "ogologo. Ihe ndị a nwere ike isi na $ 400- $ 800. Nanị akwụkwọ ikike nke nkeji a bụ otu afọ akụkụ na otu afọ nke ọrụ.
Usoro ProForm Power Series bụ ihe nrịgo site na arụmọrụ arụmọrụ. Mpempe akwụkwọ na-ele anya yiri nke ahụ, ma akwụkwọ ikike ahụ dị ogologo. Na Ike 1495 na-eduzi usoro ike. O nwere ihe na-adabere ma daa, 10 "touchscreen, 34 usoro mmemme na-arụ ọrụ nlekota oru nyocha. A na - ekpuchi akụkụ ndị dị na ihe mgbịrịgwụ ole na ole maka afọ 5. Ọnụ ala n'okpuru $ 1500, Power 1495 bụ otu n'ime ụkpụrụ ProForm kachasị mma maka ụlọ ahịa na-azụkarị ụlọ. Onye ọ bụla n'ime ihe ndị a na-agba ọsọ na usoro nchịkọta ọkụ nwere 3.0 ma ọ bụ 3.5 CHP motor, akara 20 "x 60" zuru ezu, na 15% ntụgharị aka. Onye ọ bụla n'ime usoro usoro isiFit-njikere.
ProForm Pro Series na-emepụta nkà na ụzụ nke Proform na mpụga nke eriri na Marathon. Enwere mpi 4 na usoro a. Mkpụrụ nke usoro Proform Pro sitere na 3.5 gaa na 4.25 CHP. Usoro usoro ihe omume nke usoro nke 15% gbakwunyere -3% ida. Ihe ndị a bụ iFit kwekọrọ. Ngwongwo kachasị oké ọnụ na Pro usoro bụ Pro 900. Ejiri 900 emelitela Pro 2016 na nso nso a ma nwee 10 "touchscreen.
Ihe dị mma gbasara Proform bụ na ha na-enye mpempe akwụkwọ iji mee ka ego ọ bụla. Ahịa ahịa si na $ 399 gaa $ 3999. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-agba ọsọ ọsọ, ị nwere ike ịhọrọ ihe nlereanya ma ọ bụ ihe ọzọ nụchara. A na-apịa ọtụtụ ihe na-emepụta ihe. Egwuregwu eriri ọhụrụ nke Proform na-eme nke ọma ka ọ bụrụ ihe ndabara. Ụfọdụ n'ime ụdị ọnụ ndị dị oke ọnụ karịa ka ị ga-eme ka ị kwụsịrị ịkwado ọzụzụ n'èzí. Ntuziaka ọrụ Proform dị iche na ton. A marathon treadmill nwere ike kpuchie ihe maka ruo 6 afọ. Ụfọdụ ụdị enyi enyi na enyi na-eji akwụkwọ ikikere 90 rụọ ọrụ ma jide n'aka na ị na-eme ihe omume ụlọ gị tupu i kpebie ịzụta ihe mgbakwunye Proform.
January 18, 2016 Akwụsị blog, Proform, Ntughari Enweghị asịsa
January 2016 Drugstore $ 15 Gbanyụọ $ 75 Iwu maka Ndị Ahịa ọhụrụ Valid ruo 1 / 31 / 16
Ngwaọrụ pedometa: 20% Gbanyụọ Pedometers na eSportsOnline